Fil d'actualités du 25/09/2018
25/09/2018 - 15:00 : POLITIKA KMMR:Efa an'aliny ny olona nandrotsaka vola ho an'ny kandida Marc Ravalomanana taorian'ny fanokafana ilay kaonty Tahiry ampiasaina amin'ny propagandy.
25/09/2018 - 14:55 : RAVALOMANANA:manatrika fivoriana any Bruxelles miaraka amin'ny vondrona eoropeana ny kandida laharana faha 25 Marc Ravalomanana
25/09/2018 - 13:00 : PESTA: Miisa 21 ny tranga voaray ka nampiahiahy. 05 tamin’ireo no voamarina fa pesta tao aorian’ny fitiliana ary tao anatin’ny Distrika 09 no nahitana izany. 16 kosa no mbola ahiana.
25/09/2018 - 12:30 : FIFIDIANANA : Tontosa androany teny amin'ny Biraon'ny CENI Nanisana ny fifanaovan-tsonia teo amin'ny CENI sy ny fanjakana Britanika amin'ny fandrotsaham-bolan'izy ireo ao amin'ny kitapom-bola SACEM.
25/09/2018 - 11:00 : MARC RAVALOMANANA: Lasa any ampiran-dranomasina ny tenany ka hisy ny fihaonana amin'ny mpanohana hatao ao Parisy Frantsa ny 29 septambra izao.
25/09/2018 - 10:45 : AMBOVOMBE ANDROY: Fiara tsy mataho-dalana nentina lehilahy roa no tratra no voalaza fa nangalatra zaza 4 taona eo ho eo. Misavorovoro eo anoloan'ny biraon'ny zandary ny olona mitaky ny hhampiharana ny lalàna sao haodikodina ao dia tsy misy tohiny aveo, hoy izy ireo.
25/09/2018 - 10:30 : BAKALOREA: Hivoaka ny 18 oktobra ho avy izao ny valim-panadinana bakalorea 2018, ka nanomboka omaly no nanomboka ny fitsarana ireo taratasim-panadinana ho an'ny eto Antananarivo.
25/09/2018 - 10:00 : FAHAFATESANA DIPLAOMATY AMERIKANINA: Efa nanokatra fanadihadiana ny mpanao famotorana Amerikana sy ny Manam-pahefana Malagasy ary efa misy olona ahiahiana notazonina am-ponja ankehitriny.
25/09/2018 - 09:45 : ANGOLA: Naiditra am-ponja vonjimaika noho ny fanidinkodibam-bola 500 tapitrisa dolara i José Filomeno dos Santos Zanaky ny Filoha Angolais teo aloha José Eduardo dos Santos.
25/09/2018 - 09:30 : VIDIN-DRANO: Milaza ny eo ny minisitry ny angovo Lantoniaina Rasoloelison fa tsy mbola misy ny fampiakarana vidin-drano amin'izao fotoana izao, eo anatrehan'ny resabe mandeha fa hiakatra izany
Archive du 20180317
Fifidianana 2018 Tsy andeha amin’ny tokony ho izy, hoy i Alain Andriamiseza
Na dia ny fandroritana ny resaka lalàm-pifidianana eny amin’ny antenimieram-pirenena ankehitriny fotsiny aza, hoy ny kandida ho filoham-pirenena, Alain Andriamiseza, dia efa manambara fa tsy handeha amin’ny tokony ho izy ny fifidianana eo,
Fiarahamonim-pirenena Mandindona ny hitroatra
Ireny efa hita tamin’ny alakamisy ireny izany ny firaisankinan’ny Malagasy rehefa misy zava-mitranga tsy ankasitrahany ka voaentana tsara izy.
Depiote Helson Brisson Erafa Tsy ilaina amin’ny fifidianana izany « Bulletin n° 2 » izany
Ny olom-pirenena tsirairay avy, hoy ny depiote Helson Brisson Erafa filoha lefitry ny Antenimieram-pirenena Faritanin’i Toliara teny Tsimbazaza, rehefa te-hanao fampandrosoana an’i Madagasikara dia tokony
Misy mihaino ve ?
Naneno ary iny ny sarom-bilany Nitatatata koa ny anjomara sesilany Nankadilo sofina ry kiririoka marobe Ny horakoraky ny vahoaka eraky ny arabe.
Veterinera Mbola vitsy eto Madagasikara
Omaly no natao tetsy amin’ny hotel Ibis Ankorondrano ny fanakatonana ilay tetikasa AVSF (Agronome et véterinaire sans frontiers) Asara Fagnatsara.
Rivodoza Eliakim Olona iray no namoy ny ainy omaly
Omaly maraina tokony ho tamin’ny 10 ora teo no niditra an-tanety tao Cap Masoala ilay rivodoza Eliakim, raha araka ny vaovao azo teo anivon’ny sampana mpamantatra ny toetr’andro etsy Ampandrianomby.
Mpivarotra amoron-dalana etsy Anosy Miha mitombo isa
Tsy mitsahatra ny manala ireo mpivarotra amoron-dalana manoloana ny radio nasionaly Malagasy etsy Anosy sy amin’ny sisin-dalana manakaiky ny Hotely kintana 5 Carlton amin’izao fotoana izao ny Boriborintany I.
Fetin’ny paska ao Antsirabe Hafana ny fiarahana amin’ny vondrona Star
Hafana indray ny fetin’ny Paska ao Antsirabe amin’ity taona 2018 ity. Hotanterahina any an-toerana manomboka ny 30 martsa ka hatramin’ny 2 aprily ho avy izao indray mantsy ny “Star Tour” izay hanasana ny mpiala sasatra rehetra.
Tohana ho an’ny Vondrom-paritra Distrika 3 eto Analamanga no nofanin’ny CNaPS
Nahazo fiofanana momba ny fitantanana ara-bola, ny zon’ny mpiasa sy ny fiahiana ara-tsosialy ny distrika telo avy eto amin’ny faritra Analamanga dia Andramasina, Anjozorobe ary Manjakandriana tamin’ity herinandro ity.
Razakarisoa Tita Mampivelatra saina ny fanatanjahantena
Hiverina eo amin’ny taranja tsipy kanetibe indray isika anio eto amin’ity pejin’ny Kintan’ny Fanatanjahantena Malagasy eto amin’ny gazety Tia Tanindrazana ity ka ny iray tamin’izy efa-dahy
1/4-dalan’ny Champions League Ekipa Italiana avokoa no hihaona amin’ny Barça sy Real
Vita tany Nyon (Suisse) omaly zoma atoandro ny antsapak’ireo lalao 1/4-dalan’ny Champion’s League UEFA 2017-2018. Fantatra fa ekipa Italiana avokoa no hifandona amin’ireo kalaza Espaniola Barcelone sy ny Real Madrid ka ny 3 sy 4
Hatramin’izao, mbola mitohy ihany ny resaka fofon-kelika izay nivoaka teny anivon’ny antenimieram-pirenena ny alatsinainy teo.
Faribolan’ny mpahay toekarena Hizara vahaolana amin’ny mpitondra
Sambany teto Madagasikara, raha ny fanazavan-dry zareo avy eo anivon’ny faribolan’ny mpahay toekarena eto na ny CREM no hisy fihaonambe hifampizarana manokana ny fepetra tokony hananana hampiarin-doha ny toekarena eto amintsika.
Foloalindahy Hiandry fanongam-panjakana ve vao hetsika?
Tena miaina ao anatin`ny krizy lalina hatrany ny firenena Malagasy satria mitohy hatrany ny tsy filaminana sy ny savorovoro politika amin`izao fotoana izao. Tsy milamina intsony ny tany kanefa toa mangina ny Foloalindahy.
Nirefotra ny Basy teny Masay Matin’ny sakamainty ireo gadra nandositra
Nirefodrefotra ny basy teny amin’ny Marais Masay omaly manodidina ny tamin’ny 3 ora tolakandro mahery kely noho ny fanenjehan’ny polisy ny 2 tamin’ireo gadra tamin’ireo 5 tafatsoaka ny fonjan’Antanimora ny alin’ny sabotsy 7 hifoha 8 oktobra 2017,
Tetezana any Manakarabe Mitentina 1,2 miliara ariary ny fanamboarana
Velom-panantenana ny mponina any Manakara ary ho afa-pahasahiranana amin`izay noho ny fanamboarana ny tetezana ao Manakarabe.
MPANDRAHARAHA NY FONJA
Mbola hisy ny fivoriana hiarahan’ny minisiteran’ny fitsarana sy ireo mpandraharaha ny fonja ny alatsinainy 19 martsa ho avy izao ka mandritra izany no hanambaran’ny avy ao amin’ny minister any fanapahan-kevitra manoloana ny fitakian’ny sendikan’ny
Efa ho 1 volana izao no tsy nisy tompon’andraikitra mandray ny andraikiny mihitsy ilay tambohom-bato nihotsaka etsy amin’ny sampanana mampitohy an’Andrainarivo sy Ambohitrakely etsy.
Mpangalatra iray no tratra tao amin’ny faritry ny trano fonenan’ny mpianatra teny amin’ny sekoly Poliklinika Vontovorona omaly. Tao amin’ny amin’ny Bloc 2 no nisy izany, ary efa nandeha ny vono isan-karazany. Hatramin’ny omaly hariva nanoratana dia tsy hay aloha izay niafarany.
Vaovao avy any ivelany
Jacob Zuma Henjehan’ny fitsarana noho ny kolikoly nataony
Miisa 18 ny vesatra iampangana ny filoha Afrikanina tatsimo teo aloha Jacob Zuma araka ny nambaran’ny fitsarana omaly.